Date My Pet » Ida Dogs : New Leash On Life
kubudikidza Claire Cook
Last updated: Oct. 14 2020 | 6 Maminitsi verenga
mukoma wangu Michael akanga achigara neni kusvikira muchato wake paakadzoka mudambudziko.
“Ko iwe Molly coddle iye, Sarah,” baba vangu vakati. “Just kumupa dzinoungana katatu pazuva uye nechokwadi ane starched chena hembe kupfeka kuhofisi.”
“Kana zvakadaro anotarisa doro bhodhoro, kuvanza ake foni,” hanzvadzi yangu Carol akati. “Usa, chero mumamiriro api ezvinhu, kumurega akadhakwa dhayira Phoebe. Akanga muroyi ane guru B apo amuwana, uye iye achava muroyi ane guru B patinowana yekutsiva wake.”
“Nei Michael kugara mumba mako?” hanzvadzi yangu Christine akati. “Tine zvizhinji nzvimbo, uye hapana mhosva, asi zviri saka haana vakanaka nzira iwe nguva dzose kuti dzatsatsa naye.”
pashure pemwedzi, pamwe makore, kuedza kuchengeta muchato wake pamwe chete paakanga achigara pamba, Michael aitarisira kuti kusavapo wakaramba, saizvozvo, kuti mwoyo Febhi dzinokura fonder. Saka akatama uye ikozvino akadzingira vanasikana vake, Annie uye Lainie, kuti Irish danho kutamba pamusoro Chitatu pashure chikoro uye akatora navo chisvusvuro pashure. Vaipedzawo kupera kwevhiki rose naye.
At imba yangu.
“sei yakareba unofunga zvichava?” John Anderson pakupedzisira akabvunza. Izvi zvaiita mubvunzo musoro pamunhu vakanga vava vangu kukosha zvimwe.
“Anoita kusvikira gehena yaita chando pamusoro sezvisingadaviriki tariro?” ndakapindura.
Pashure pokutanga kusingafadzi kuti ukama hwedu, John uye yandaigara nemwedzi kufambidzana mufaro matanhatu. zvino isu vaiva chaizvoizvo ari munhare. Ndainetseka dzimwe nguva pakati pousiku isu Dai dzakava yakakwana mufaro pfungwa kuwana kuburikidza ichi. Uye haana mufaro vane pasherefu upenyu? Zvingakunakirai zvinofa yokuregeredza tisati zvataigona haawedzeri zvakare nguva dzose?
manheru ano, wangu Michael mukoma Ini ndokupfura shure pamubhedha wangu. zvemadhenari starched shirt chena yakaoma yokuchenesa mumasaga A vhiki akanga neminda pamusoro wekusimbisa muviri wangu. Two chinhu Sam Adams doro mabhodhoro flanked nehafu-kudyiwa chizi Pizza patafura kofi. Ndaiva hanzvadzi yakanaka.
“Zvakanaka,” Michael akati.
Pakupera kwevhiki, Michael uye Annie uye Lainie uye ndakanga vakaputsa rangu tamba okuberekwa atiki masitepisi uye aenda pamusoro kuvhimwa zvokutambisa. vana vevanun'una vangu havana mwoyo zvisaririra ndichiri muduku uye vaiva shure pasi uye vakarasikirwa mumitambo foni pasina nguva. Zviripachena mukoma wangu ainzwa kudaro, nekuti iye zvino akanga achitamba wangu Kukura kaputeni mudhori.
“Iye are maviri mumwe, zvokungonakidzwa kaviri!” Ini nomusoro wangu peppiest mukutevedzera kwema1970 ezvokutengeserana.
Kaputeni aiva hanzvadzi duku Barbie raMwari. Kufanana Doublemint uduku yedu kuti akanga touted sezvo vaviri, piri, mints vaviri mumwe, Shanduro iyi kaputeni aiva nezvidhori maviri mumwe. Pawakatanga akamuona, iye wakaonekwa kuva zvishoma blond chepuraimari mudzidzi chikoro inonaka. Asi kana iwe zvayaitenderera paguyo rake rworuboshwe ruoko shure, iye chaizvoizvo akakura mazamu zvakarurama muchizviona.
Sokunge muviri Barbie kuti hazviiti asina ini Volt kukwira zvakakwana yangu ouduku makore. Nemhaka Kukura kaputeni, Ndingada ndakapedza kanenge gore prepubescent upenyu hwangu ichingotenderera roruboshwe ruoko shure sezvinoita backstroker imwe-zvombo apo ndakapfugama parutivi mubhedha wangu achiti minyengetero yangu usiku hwoga hwoga. Abvunza Mwari kuti akomborere uye Baba uye nehama dzangu nhatu nehanzvadzi mbiri uye vose vari kufa nenzara vana Amai muna China, Ndakanyengeterera naida, yakakura kupfuura hanzvadzi yangu Carol kuti, aiva nemakore maviri vakuru, kufadza Mwari, Vasvika pamberi akaratidza wangu namanomwe-mwedzi munun'una Christine kuti kukwira.
“tinofanira, tinofanira, tinofanira kuwedzera bust yedu,” Michael akati kunze kwangu makore aya ose akazotevera sezvaakanga pumped Kukura kaputeni wacho rworuboshwe ruoko uye pasi. Mazamu ake akaonekwa uye akanyangarika zvakakwana nguva cant ake.
“Knock rugure,” ndati. Pandakasveerera wangu wekare mudhori.
Michael yanked naye kure. “Ndiani Ndicho gonna kundiita?”
“Mumupe kwandiri,” Ini akadaidzira sezvo ini lunged nokuda kaputeni. Old tsika dzibve nezvose, asi zvakanga zvechokwadi zvinoshamisa nzira hama dzangu nehanzvadzi uye ndaigona dzokera kuna pauduku yedu muchizvinyengera ari nanosecond.
A ruzha kuhukura akandiita kusvetuka. Mother Teresa, Michael kuti humongous St. Bernard, uyo akanga achigara neni kusvikira Phoebe akarasikirwa naye kana kusvikira gehena ndakadaro pamusoro, vakabata Kukura kaputeni.
Michael Akakwakuka, akamira. “Mother Teresa, Donhedza.”
Mother Teresa wakaitwa kaputeni wacho rworuboshwe ruoko pakati pameno ake sezvo iye akadzungudza musoro wake dzimwe dzekare tsika chayabata-kuuraya akanga kunyatsoti vakashanduka mberi. Mazamu The mudhori akawoneka uye Rakanyangarika mumwe dzinozununguka.
Ini akamhanyira kicheni uye yabata doggie vaitire gaba. Ini akatambanudzira munhu bhisikiti pfupa serin'i.
Mother Teresa akazviratidza kurera imwe tsiye.
Ndakaisa vaitire wokutanga pasi uye akatora kechipiri munhu kubva muchirongo.
Akapa Kukura kaputeni kumwe kuzununguka.
“naka,” ndati. “Asi wakanaka nyevero, Ndiri nokudhirowa pamutsetse vatatu.”
Mother Teresa akaisa Kukura Up kaputeni zvinyoronyoro pasi uye dzakaunganidza tsauri vake vatatu.
“Musikana akanaka,” Michael akati.
“Ndizvo debatable,” ndati. Ini vakanhonga wangu drool akafukidzwa mudhori ndokutanga kupukutwa naye majini angu. Ini akazoongororazve uye omubata pizza napkin.
“pano, Ndichaenda kuwana kuti,” Michael akati.
Ini mumaoko Pandaikura kaputeni nemucheka wekumeso uye plopped pasi panhoo.
Michael apedza kushambidzika Kukura kaputeni uye akanga adzokera rhythmically kupomba kwake rworuboshwe ruoko.
Ndaiziva zvakanga Kuchema. Ini vakaziva wangu sisterly basa. Ndingazoenda pfungwa dzake kure Kukura kaputeni, ipapo ndingazoenda pfungwa dzake kure Phoebe. Ndingada kumubatsira kuona muchato wake aitarisira uye kubatsira naye tichiyambuka kurambana ake paunoedza kuchengeta inokanganisa Annie uye Lainie kuti miti zvishoma. Zvino ndingatora kumuwana yakakodzera machisa. Panongotanga ndakawana kuti zvose akaenzana kure, Ini John Anderson uye aizopinda kure kupinda yomufaro mukuru ine ravira pamwe chete.
“Ndinofunga Ndinenge risingazodamburwi nawo,” Michael akati. “Munoda kuti kutora Mother Teresa kubva imwe nguva, kana unogona kuwana naye pamberi penyu vasataure kunorara?”
Mother Teresa akasendamira pamusoro uye lapped dama rangu. ini akagomera. “Ndichatora naye.”
Michael akapa chinosuruvarisa hafu-wave. “G'night, Sarah. Husiku, Mother Teresa.”
Akatora isingafadzi danho kurutivi guestroom.
Akatendeuka. Kukura kaputeni akanga tikabva mumaoko ake.
Ini akatambanudzira ruoko rwangu. “Ndipei mudhori, Michael.”
Ndakagara ikoko kwechinguva, scratching Mother Teresa ari kufarira nzvimbo yake itsva, kodzero shure nzeve yake kuruboshwe. Ndakazomuka uye kwaigara yangu aimbova tenzi yokurara, Ndingada izvo dzikava muhofisi uye kwandaishanda pamusoro muzvirongwa ochengetwa mamwe zvinhu mukirasi yangu.
Ini rummaged kuburikidza murwi scrapbooks pasi pasherefu. Ini ndokuburitsa pamuchato wangu Album, dusted naro kure noruoko rumwe, akabata kwechinguva. Ini maziso angu uye vakaedza kufungidzira Kevin, murume wangu aimbova. All Ndaigona rinoita yakanga isina kujeka mufananidzo womunhu agere pamusoro chimbuzi chigaro, yakavanzwa shure pepanhau musoro wake, bhurukwa ake kunhivi dzake Zviziso, suo yokugezera rakavhurika. Ndaizvibvunza kana Kevin kuverenga mangwanani nhau yake pamusoro iPad zvino.
pakupedzisira, Ndawana mukabhuku ndakachengeta dai pandakanga tichiyambuka zvokufambidzana Chiitiko. A peji nerimwe kwemazuva angu, yavose sezvavakatarirwa pamwe nyeredzi ruoko yaidhonzwa uye mireza. Naizvozvo vazhinji tsvuku Mireza billowed mhiri misoro mapeji kuti akafanana sero pane motokari inotengeswa. George kubva Hanover, akanga kutsvaka ukama rimwe zuva mwedzi, hapana tambo, hapana wazvipira. Ben, uyo akakura chemombe yake inomera. The mukomana kutsvaka Woman ndinoiitawo kadikidiki, uyo ndingada muchidimbu mibvunzo pamwe nekuti ndakada nzira iye capitalized Woman, asi kunyanya nokuti ndaikwanisa kudya zvakawanda. Ray Santia, aimbova vanenge Hockey nyeredzi ndakanga ndapinda akavata. Bob Connor, baba mudzidzi Ndingadai ndisina akavata.
Raiva sango kunze uko. Poor Michael. Asi kana ndisina kuwana iye mumba mangu uye chake fara nzira, ndisati ndaiziva ndive kunze uko pachangu.
Ndakatora nguva kunzwa nezvazvo. Ndakabva ndawana pachake AD hanzvadzi yangu Carol akanga agovera kwandiri, taped kupinda musimboti peji.
Voluptuous, kuzvigutsa, kutobudisa uye mafaro. padikidiki 40 DWF anotsvaka murume chaiye kugoverana starlit nousiku. Ida imbwa.
Ndaitakura kufambidzana yangu notibhuku kuna yokutandarira, pamwe chandinonamatira tsvuku penzura. Ndakatendeuka kuti peji matsva kukoreji vakamiswa-uye akarova vanhu chokudzimisa pamusoro mazino angu ini tweaked ari AD kuti zvienderane mukoma wangu.
Buff, penya, wakaputsika asi kwete zvokusabatsirika. Handsome nokukurumidza DWM pamwe bvudzi rake rose anotsvaka mukadzi chaiye akasangana vanasikana vake’ zvinodiwa. Ida guru slobbery imbwa.
(Rakadhindwa pamwe mvumo kubva mubhuku Latest Claire Cook raJehovha 'Ida Dogs – New Leash On Life’ – bhuku 2 yakanakisisa aitengesera Ida Dogs dzino. Unogona kuwana zvakawanda pamusoro Claire uye mabhuku aro pa www.clairecook.com)